किन हुन्छ रक्सी धेरै पिएपछि ‘ह्याङओभर’, कसरी जोगिने ? – Ramailo Sandesh
किन हुन्छ रक्सी धेरै पिएपछि ‘ह्याङओभर’, कसरी जोगिने ?
एजेन्सी । चाडबाडको समयमा रक्सी पिउने कतिपय मानिसको बानी हुन्छ । विशेषगरी चाडबाडमा पार्टीहरू अझै धेरै चल्नेगर्दछन् । रक्सीका गिलासहरू एक अर्कासँग ठोक्काउदै थाेरै भन्दा भन्दै पनि अलि धेरै नै पिउन थाल्दछन्, जसले ‘ह्याङओभर’ बनाउन थाल्दछ ।
रातिकाे पार्टी सकिएपछि टाउको भारी हुन थाल्छ, बान्ता र रिँगटा लाग्न थाल्छ, थकाइ महसुस हुन थाल्दछ । मानिसहरू यसलाई धेरै पिएपछि भएको ‘ह्याङओभर’ हो भन्छन्। मानिसहरुले हिलसा माछाको अचार खानु, अण्डा खानु वा ओएस्टर खानु, ‘ह्याङओभर’ हट्छ समेत भन्ने गरेका छन् ।
अधिक रक्सी पिएपछि प्रायः मानिसहरू ह्याङओभर भएको बताउँछन्। फेरि जो साथीले अघिल्लो दिन धेरै पिउन बल गरेको थियो उसैले भोलिपल्ट ह्याङओभर हटाउने उपायहरू पनि बताइरहेको हुन्छ।
ह्याङओभरबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने समस्या आजको मात्र होइन। इजिप्टमा भेटिएको १९०० वर्ष पुरानो एउटा भोजपत्रमा यसबाट मुक्ति पाउने उपाय लेखिएको थियो।
तर आज पनि ह्याङओभर हटाउने अनेकौँ उपायहरू बताइन्छ। जस्तै क्यानरी भनिने चराको भुटेको मासु खानु, काँचो अण्डा खानु, गोलभेँडाको रस पिउनु, सस वा त्यस्तै चिज मिलाएर तयार पारिएको ओइस्टर खाँदा ह्याङओभर हट्ने बताइएको छ ।
रमाइलो कुरा के छ भने यीमध्ये कुनै पनि उपायले धेरै रक्सी पिएर भाेगिरहेकाे ह्याङओभर समस्याको समाधान गर्ने निश्चित छैन। निश्चित समयपछि यो समस्या आफै हराउँछ। त्यस अर्थमा समयसँगै ह्याङओभर हटेर जान्छ।
यी मध्यै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एसिटेल्डिहाइड हो। यसलाई थप टुक्रा गरेर इन्जाइमले अर्को रसायन एसिटेटमा परिणत गरिदिन्छ। यही एसिटेट रसायन फ्याटीएसिड र पानीमा परिणत हुन्छ। केही वैज्ञानिकहरू ह्याङओभर यही एसिटेल्डिहाइडका कारण भएको विश्वास गर्छन्। तर केही अध्ययनहरूले यो रसायनको ह्याङओभरसँग प्रस्ट सम्बन्ध नहुने देखाएको छ।
Four Ways Food Banks Are Feeding Kids Right Now
facebook sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonemail sharing buttonsms sharing buttonsharethis sharing button
कसरी हटाउने ह्याङओभर
अहिलेको लागि भने रक्सी धेरै पिएर हुने समस्याबाट छुटकारा पाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको आराम गर्नु, धेरै पानी पिउनु र एक चक्की एस्पिरिन लिनु हो